Miatrika famonjana noho ny tatitra momba ny fanorisorenana ara-nofo ilay mpampianatra Indoneziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2018 7:08 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Ελληνικά, Español, Português, Français, 繁體中文, Italiano, Deutsch, English
Vehivavy iray no nohelohin'ny Fitsarana Avo tao Indonezia higadra an-tranomaizina mandritra ny enim-bolana tamin'ny fiandohan'ny volana Novambra noho ny fandraketany ny antso an-telefaona mivantana nisy ny fanorisorenana ara-nofo izay avy amin'ny lehibeny, izay nandrahona ara-nofo azy tao am-piasana.
Nilaza i Nuril fa ny tale, izay antsoina hoe Muslim (mahazatra ao Indonezia ho an'ny olona iray fantatra amin'ny anarana tokana), dia nandrahona sy nikaoty azy, matetika mirehareha momba ny fiarahany ara-nofo amin'ny mpampianatra hafa ao an-tsekoly. Matetika hoy izy dia nanasa azy hihaona aminy tany amin'ny trano fandraisam-bahiny izy mba hifanaovany fotaona aminy. Tsy nitory momba ilay fanorisorenana izy, noho ny tahotra ho very asa.
Saingy nanomboka nahare tsaho izy avy eo fa izy tenany mihitsy no miaraka ivelan'ny fanambadiana amin'ny lehibeny. Nanapa-kevitra ny hanao fandraketana ny resany an-telefaonina amin'ny lehibeny izy, mba hanangonana porofo amin'ny zava-nitranga, raha toa izy ka mila manambara ny tsy faha-melohany. Saingy navoakan'ny iray tamin'ireo mpiara-miasa tamin'i Nuril tao amin'ny WhatsApp ity fandraisam-peo ity ary tonga tany amin'ny mpikambana maro tao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny sekoly. Voatery nametra-pialana i Muslim, saingy noraisin'ny sampan-draharahan'ny tanora sy ny fanatanjahan-tena taty aoriana.
Sariitatra an-tserasera avy amin'ny Gump n Hell mamerina mitantara ny nanjo an'i Nuril. Nahazoana alalana.
Nosoniavin'ny olona maherin'ny 162.000 ny fanangonan-tsonia an-tserasera nangataka ny filoha Joko Widodo (Jokowi) hanome ny famotsoran-keloka ho an'i Nuril .
Na dia teo aza ny fanohanana goavana avy amin'ny vahoaka ho an'i Nuril, nilaza i Jokowi fa tsy hitsabaka amin'ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Tampony izy. Nanoro hevitra an'i Nuril izy hikaroka fanihadiana momba ny raharaha na mangataka ny grasi (famindram-pon'ny filoham-pirenena) rehefa hanan-kery ny saziny.
Nitsikera ny fanambaran'ny filoha ny Ivontoeran'ny Fanavaozana ny Fitsarana Heloka Bevava (ICJR) ary nanontany ny andraikiny amin'ny fiarovana ny vehivavy sy ireo niharam-boina hafa tamin'ny fanorisorenana ara-nofo ao amin'ny firenena.
Nisy ihany koa ny fanentanana avy amin'ny fanangonam-bola izay natomboka mba handoavana ny onitr'i Nuril. Hatramin'ny fotoana nanoratana dia efa nahangona vola mitentina 22.500 dolara ny fanentanana.
Raha namaly ny fanangonan-tsonia ho fanavaozana ny lalàna UU ITE, nanamafy ny Minisitry ny Serasera sy ny Fampahalalam-baovao Indoneziana (Menkominfo) Rudiantara, raha sady miombom-kevitra tamin'ny zava-nitranga tamin'i Nuril ihany izy, fa tsy ilaina ny fanavaozana ny lalàna. Nampiany fa tokony hisambotra ny tena meloka izay nanaparitaka ny fandraketana nataon'i Nuril ny polisy. Nampiahiahy ny vondrona mpiaro ny zo nomerika ny valinteny nomeny, izay matahotra fa tsy hisy fanitsiana ny lalàna manjavozavo ary mbola ho maro ireo niharam-boina no mety hiatrika ny anjara tahaka izany tahaka an'i Nuril amin'ny hoavy.
Rehefa niresaka tamin'ny solontenan'ny Fikambanan'ireo Niharan'ny UU ITE ( PakuITE) aho, dia nanazava ny antony mahatonga ny lalàna ho famoretana izy ireo:
Raha nilefitra tamin'ny faneren'ny vahoaka, nanapa-kevitra ny hanemorana ny sazin'i Nuril ny 19 Novambra 2018 ny Biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana .
Mandritra izany fotoana izany, tsy nisy fepetra ara-dalàna noraisina momba an'i Muslim, na dia teo aza ny didim-pitsarana navoakan'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny porofo fa nandrahona ara-nofo ireo mpampianatra maro izay anisan'ny ekipa mpiara-miasa taminy teo aloha izy. Nivoady tsy handray fepetra momba azy i Mataram, ilay tanàndehibe izay hiasany ho lehiben'ny Sampan'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena.